CBC | Calvary Burmese Church
Rev. Dr. Joseph Glaze’s sermon on 18th Anniversary
February 23, 2015 February 23, 2015 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
Feb 1, 2015: I am not sure, (if) Jesus would have madeagood pastor… I mean.. would you wantapastor who said toafellow preacher things like you all hypocrite….
CBC Chairperson Wai Austin (My Phyu) welcome speech on BCANA
July 23, 2014 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
July 20, 2014: Wai Austin (Ma Phyu CBC chairperson) Continue reading →
MBC General Secretary at BCANA Opening Day
July 17, 2014: Rev. Dr. Yam Kho Pau, general secretary of Myanmar Baptist Convention at (BCANA) Continue reading →
Rev. Samauel Saw – BCANA Opening Day
July 17, 2014: Rev. Samauel Saw at (BCANA) Continue reading →
Aunty Mu Mu Khin’s Song for Mothers
May 14, 2014 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
May 11, 2014: Aunty Mu Mu Khin (mother of Yadana Oo) Continue reading →
Images from 2014 Mother’s Day
May 13, 2014 May 13, 2014 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
Rev. Dr. Vungh Lian – CBC’s one day Evangelical Seminar
April 29, 2014 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
April 12, 2014; Rev. Dr. Vungh Lian’s teaching Continue reading →
Saya Peter Myint Lwin – Evangelical Seminar Praise & Worship
April 12, 2014: Saya Peter Myint Lwin teaching on CBC’s Continue reading →
Celebrating Silver Anniversary of Ministry
March 26, 2013 March 26, 2013 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
March 24, 2013; In March 3013, Rev. Dr. Saw Ler Htoo’s commitment into the Lord’s ministry turned 25 years. Continue reading →
House Warming Message (Pr. Hkawn Ja)
November 1, 2012 July 8, 2013 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
ဆရာစောလယ်ထူး မိသားစု အိမ်သစ် တက် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်း ၀တ်ပြုအစည်းအဝေး တွင် ဆရာမ ခေါန်ဂျာ ဟောသောတရားဒေသနာ Continue reading →
October 25, 2012 December 7, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
ဦးစောအယ်ကလာ (ဘိုသိုး) ၏ Pastor Appreciation Sunday ဂုဏ်ပြု ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်း။ Continue reading →
October 23, 2012 October 25, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
12 Annual Burmese Food Fair
June 18, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
March 10, 2012 March 10, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
၁၄ ငါ့နာမဖြင့်သမုတ်သော ငါ့လူတို့သည် ကိုယ်ကို နှိမ့်ချသဖြင့်၊ ငါ့မျက်နှာကို ရှာလျက် ဆုတောင်းပဌနာပြု၍ အဓမ္မလမ်းကိုလွှဲရှောင်လျှင် ငါသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ နားထောင်မည်။ သူတို့အပြစ်ကိုဖြေ၍ သူတို့ကိုချမ်းသာပေးမည်။ ၁၅ ငါကြည့်ရှုမည်။ ဤအရပ်ဌာန၌ ဆုတောင်းသော စကားကို ငါနားထောင်မည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
Presentation On Brief History of CBC
March 6, 2012 March 6, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
CBC’s Church School performingapresentation on History of Calvary Burmese Church, on February 5, 2012.
ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကရာနီမြန်မာအသင်းတော်ရဲ့ ၁၅ နှစ်မြောက် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း ၀တ်ပြုခြင်း အစီအစဉ်မှာ ကလေးငယ်များမှ အသင်းတော်ရဲ့ သမိုင်းကို သရုပ်ဖော်တဲ့ Presentation လေးတစ်ခု ပြုလုပ်ပါတယ်။ ကရာနီမြန်မာအသင်းတော် စတင်ခဲ့တဲ့ အချိန်များမှာ ဆရာကြီးမရန်ယော် မိသားစု၊ ဦးကမ်မိသားစု၊ Ko Roland Maung, Ko Khai Pi, Ko Khawmpau, ဆရာမနော်လှကြည် နှင့် အချို့အချို့သော ကနဦး အသင်းသားတွေနဲ့ ဘယ်လို စတင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရန် Watch Video
Presentation and Church Choir on 15th Anniversary
March 1, 2012 March 1, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးတော်သက်သက်ကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ နှင့် ၅ ရက်နေ့များတွင် ကရာနီမြန်မာအသင်းတော်သည် (၁၅) နှစ်ပြည့် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်း ၀တ်ပြုခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ၊ ဂိုဏ်းဂဏပေါင်းစုံဖြင့်ဖွဲ့ စည်းထားသော ဤအသင်းတော်သည် ၁၅ နှစ်အတွင်း ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးဂရုဏာတော် ခံစားရသည့် အပြင် အသင်းသား ၁၀ ယောက်ကျော်ကျော်ဖြင့် စတင်ခဲ့သော အသင်းတော်သည် ယနေ့ ဧ၀ံဂေလိ ပြုလုပ်သော အသင်းတော်၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူမျိုးပေါင်းစုံ (ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မြန်မာ) မိဘမဲ့ကလေး အယောက် (၄၅၀)ခန့်ကို ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်သော အသင်းတော်၊ ကျမ်းစာကျောင်းသား/သူ နှစ်ဒါဇင်ခန့်ကို အမျိုးသမီးမိတ်ဿဟာရ ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့် ထောက်ပံ့သော အသင်းတော်၊ စာပေ၊ ဗီဒီယို များအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း သတင်းကို ဖြန့်ဝေသော အသင်းတော် ဖြစ်နေပေပြီ။ ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးတော်သက်သက် အားဖြင့် ဤအရာအားလုံး ကိုဆောင်ရွက်ခွင့် ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
February 27, 2012 February 27, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
လွန်ခဲ့သော ၁၈၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၀) ရက်နေ့သည် ဆရာယုဒဿန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကယ်တင်ခြင်းသတင်း ပြောကြားရန် မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် Salem မြို့ဆိပ်ကမ်းမှ စတင်ထွက်ခွါခဲ့သော နေ့ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၂ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် နှစ် (၂၀၀) ပြည့်လေပြီ။ သွေး၊ ချွေး မိသားစုဝင် တို့၏ အသက်တို့ ကိုပေးစပ်ပြီး မြန်မာလူမျိုးများအား ခရစ်တော်၏ ရင်ခွင်သို့ လမ်းပြပို့ဆောင်ရန် မဟာဧ၀ံဂေလိ ခရီးစဉ်ကို စတင်ခဲ့သည့် နေ့ဖြစ်ပေသည်။ ဤ နှစ် (၂၀၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း အစီအစဉ်ကို မက်ဆာချုးဆက်ပြည်နယ် Malden မြို့ရှိ First Baptist Church of Malden တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၇-၁၈-၁၉) ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ အမေရိကန် နိုင်ငံ ပြည်နယ် အသီးသီးမှ မြန်မာအသင်းတော်များ လည်း ပါဝင် မိတ်ဿဟာယပြုနိုင်ခဲ့သည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
CBC 15th Anniversary
January 30, 2012 January 30, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
Yadana Oo’s Christmas Song at CBC
January 5, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
Every years, Calvary Burmese Church had its Christmas celebration on 24th December. This year, singing carol songs, Children’s presentations, drama from men fellowship, having Burmese traditional food (mohingkha) as dinner, and listening christmas songs from some singers were part of the celebration.
October 5, 2011 October 5, 2011 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
Place: Calvary Burmese Church, Washington DC
Sermon ( Sayama Ngiak Pui ) at CBC’s 14th Anniversary
February 16, 2011 October 3, 2012 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
ကရာနီမြန်မာအသင်းတော် (၀ါရှင်တန်ဒီစီ) ၏ ၁၄ နှစ်မြောက်နှစ်ပါတ်လည် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း
အစီအစဉ်တွင် Sayama Nomi Kam ( Ngiak Pui) ၏တရားဒေသနာ။
ရက်စွဲ။ ။ Feb 13, 2011
CBC Christmas 2010
December 29, 2010 July 12, 2011 / Peter Lwin	/ Leaveacomment
၂၀၁၀ ကရာနီမြန်မာအသင်းတော်၏ Christmas Eve အစီအစဉ်များမှ အချို့သောအစီအစဉ်များ။
K. Ja Nu & Friends
Hawaiian Aloha dance
K. Ja Nu & Kids
Calvary ကလေးငယ်များရဲ့ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း
November 17, 2010 August 31, 2011 / Peter Lwin	/ Leaveacomment